Station Fanaraha-maso - Shenzhen Joint Teknolojia Co., Ltd
Mitaky toe-draharaha ankehitriny
Amin'ny fifandraisana Network, misy maro base toerana nozaraina manerana ny tany, ary maro tamin'izy ireo no hita ao amin'ny tendrombohitra avo, sarotra ny fikarakarana, ny nentim-paharazana fikojakojana avy amin'ny fisafoana kosa Mitaky be dia be zavatra hafa, loharanom-bola, sy ny mahantra fahatokisana sy ny fotoana nilany azy. Mba hahazoana antoka ny tsy tapaka ny tambajotra asa any Shina, avo fepetra takiana eo amin'ny fitondrana sy ny gropy fitaovana rafitra atsangana.
Ireo fepetra ireo dia ahitana: Remote fanaraha-maso ny powering fitaovana, fitaovana fifandraisana; mampihena ny fikojakojana vola, ary fiantohana ny feon'ny fepetra ny rafitra asa mba hampitomboana miasa feno fahombiazana.
Base Transceiver Site rafitra fanaraha-maso ny rafitra feno natambatra tamin'ny tahirin-kevitra (toy ny andriamby varavarana sensor sata (fidirana fitantanana) mari-pana, hamandoana, hery, rivotra javatra mampahalefaka, sary, sns), azo avy sensor ary nampitaina tamin'ny alalan'ny fifandraisana alalan'ny terminal ny foibe, mba hanara-maso Ambient tontolo iainana, ny hery sy ny toerana mailo ara-potoana.
Site lavitra fanaraha-maso ny tontolo iainana
Site fanjifàna angovo fanaraha-maso |
Site fizarana fahefana fanaraha-maso
Site manokana fitantanana
Site vonjy taitra Naniraka valinteninao sy ny fitantanana
toerana fandidiana & fitantanana vola
handahatra ny fitaovana fikojakojana amin'ny fandaharam-potoana
Supply ny solika ara-potoana
Ahena ny solika sy ny fanjifàna angovo
Arovy fananan'ny manan-danja ao an-toerana